तपाईं केही जान्न चाहनुहुन्छ ? एक्लै बस्नुहोस् « Mero LifeStyle
तपाईं केही जान्न चाहनुहुन्छ ? एक्लै बस्नुहोस्
मेरो लाइफस्टाइल	|| 21 November, 2021
यति तपाईं एक्लै हुँदा पनि दिक्क मान्नुहुन्छ र दिन बित्दै जाँदा, दुःखी महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एकदमै खराब सङ्गतमा हुनुहुन्छ । तपाईंको आधारभूत प्रश्न यही हो— “मेरो समस्या के हो ? मेरा हात-खुट्टाहरू ठीकै छन्, म देख्न सक्छु, सुन्न सक्छु, सुँघ्न सक्छु, चाख्न सक्छु, फेरि मेरो समस्या के हो ?” हो, त्यही तपाईंको समस्या हो । यो तपाईंलाई तबमात्र थाहा हुन्छ, जब तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ ।
जब तपाईंको सेरोफेरोमा मानिसहरू हुन्छन्, तपाईं बहानाहरू भेट्टाउनु हुन्छ । यदि तपाईं अरू कसैसँग रहनुहुन्छ भने, त्यसबेला सजिलै यो भन्न सक्नुहुन्छ, “यो मान्छे खत्तम छ, त्यसैले म चिढिएको हुँ । ऊ ठीक छैन, यो ठीक छैन, त्यो ठीक छैन ।” तर, जब तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ, अनि तबपनि समस्या जहीँको त्यहीँ रहन्छ भने, समस्याको जड के हो भनेर थाहा हुन्छ ।
यो गल्फ खेल जस्तै हो । अचेल थुप्रै मानिसहरू गल्फ खेलमा थुप्रै कुराहरू चाहिन्छ, यो अरू खेल जस्तो होइन भनेर बढाइचढाइ गर्छन्, उनीहरू यसको गुणगान गाउँछन् । थुप्रै मानिसहरू यसलाई सबैभन्दा कठिन र असम्भव खेल ठान्छन्, किनकि उनीहरू बललाई हान्न खोज्दाखेरि प्रायः भुइँमा हिर्काउँछन् । त्यसैले, उनीहरू यो खेलमा एकदमै बढी एकाग्रता र ध्यान आवश्यक छ भन्ने सोच्दछन् ।
कुनै पनि खेल हेर्नुभयो भने, ती खेलहरूमा बल तपाईंतर्फ आइरहेको हुन्छ । फरक-फरक वेगहरूमा, कोणहरूमा अनि फरक-फरक तरिकाले घुम्दै बल आइरहेको हुन्छ अनि तपाईंले एक पलमै अनुमान लगाएर त्यसलाई हिर्काउनु पर्ने हुन्छ । यता गल्फमा भने बल त्यहीँ थुचुक्क बसिरहेको हुन्छ ! तपाईंसँग समय नै समय हुन्छ । तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, उभिन सक्नुहुन्छ, घरी यसरी घरी त्यसरी गर्दै भिन्न-भिन्न स्थितिमा रहन सक्नुहुन्छ, त्यो बल जहीँको त्यहीँ हुन्छ ! यति हुँदा समेत थुप्रै मानिसहरू बलको सट्टा भुईंमा हिर्काउँछन् । एक्लै बस्नु भनेको पनि ठीक त्यस्तै हो । तपाईंले न त पहाड चढ्नु पर्ने हो, न गीत गाउनु पर्ने हो, न त विशाल समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको यत्तिकै बस्नु हो । वास्तवमा यही ध्यान हो, केही पनि नगर्नु; यत्तिकै बसिरहनु । यो नै सबैभन्दा सजिलो कुरा हो, होइन र ? तर, तपाईं आफैँ हेर्नुहोस् यत्तिकै एक्लै बस्दा तपाईंलाई कति धेरै कठिनाइ भइरहेको छ !